China Duplex Stainless Simbi 2205 vagadziri uye vanotengesa | Sekonic
Duplex Simbi Isimbi 2205
Mamwe Mazita Ekutengeserana: 2205, UNS S32205, 00Cr22Ni5Mo3N,W.Nr 1.4462
Duplex simbi isina ngura 2205 chiwanikwa iri duplex simbi isina ngura inoumbwa ne22% chromium, 2.5% molybdenum uye 4.5% nickel-nitrogen alloy. Ine yakakwirira simba , Hwakanaka hunhu kuomarara uye hwakanaka hwakazara uye wemuno kunetseka ngura kuramba.Iko goho kusimba kwe 2205 duplex isina tsvina simbi inopfuura kaviri izvo zvevanhuwo zvavo simbi isina austenitic . Ichi chiitiko chinogonesa vagadziri kudzikisa huremu pavanogadzira zvigadzirwa, zvichiita kuti chiwanikwa ichi chive chinodhura-chinopfuura 316 uye 317L. Iyi alloy inonyanya kukodzera tembiricha renji -50 ° F / + 600 ° F.
Duplex Stainless Simbi 2205 Chemical Kuumbwa
makemikari C Si Mn P S Cr Ni Mo N
mureza .00.03 .001.00 .002.00 .040.04 .00.03 21.0 ~ 24.0 4.5 ~ 6.5 2.5 ~ 3.5 0.08 ~ 0.2
general 0.025 0.6 1.5 0.026 0.001 22.5 5.8 3.0 0.16
Duplex Simbi Isimbi 2205 Zvivakwa Zvepanyama
Duplex Stainless Simbi 2205 Mechanical Properties
Brinell kuomarara HB
Duplex Stainless Simbi 2205 Maitiro uye Magadzirirwo
ASME SA 182, ASME SA 240, ASME SA 479, ASME SA 789, ASME SA 789 Chikamu IV Code Case 2603
ASTM A 240, ASTM A 276, ASTM A 276 Mamiriro A, ASTM A 276 Mamiriro S, ASTM A 479, ASTM A 790
Duplex Stainless Simbi 2205 Inowanikwa Zvigadzirwa muSekonic Metals
Simbi 2205 Mabhawa & Matanda
Simbi 2205 Waya
Simbi 2205 jira & ndiro
Simbi 2205 musono chubhu & Welded mutopota
Simbi 2205 strip & coil
Simbi 2205 Zvinosunga
Izvi zvinhu mumhando dzeBolts, screws, flanges uye mamwe mafasterners, zvinoenderana nevatengi kududzirwa.
Nei Duplex Isina Simbi 2205 ?
1) Simba rezvibereko rinodarika zvakapetwa kaviri pane simbi isina simbi, uye ine zvinodiwa pakuumba
Kukwana kwepurasitiki. Ukobvu hwemadziro ematangi ekuchengetera kana emidziyo yekumanikidza yakaitwa nesimbi isina duplex is 30-50% yakaderera pane iya inowanzo shandiswa austenite, iyo inobatsira kudzikisa mutengo.
2) Ine rakaisvonaka nemishonga kunetseka ngura cracking walnut. Kunyangwe iyo duplex simbi isina chinhu ine yakaderera alloy zvemukati ine yakakwira kuramba kushushikana nemarara kutsemuka kupfuura austenitic simbi isina simbi, kunyanya munzvimbo ine chloride ions. Kushungurudzika kukora idambudziko rakakurumbira rakaoma kugadzirisa kune isina kujairika simbi isina simbi.
3) Iyo ngura inodzivirira ye2205 duplex simbi isina simbi, iyo inowanzo shandiswa mune dzakawanda midhiya, iri nani pane yakajairwa 316L austenitic simbi isina simbi, nepo super duplex simbi isina simbi ine yakanyanya kukwirira ngura kuramba. Mune mamwe midhiya, senge acetic acid uye formic acid Inogona kutora chinzvimbo chakakwira-chiwanikwa austenitic simbi isina simbi uye kunyange ngura-inodzivirira maalloys.
4) Ine yakanaka yemuno ngura kuramba. Inofananidzwa neaustenitic simbi isina chinhu ine imwechete alloy zvemukati, kupfeka kwayo ngura kuramba uye kuneta ngura kuramba kuri nani pane austenitic simbi isina simbi.
5) Iyo coefficient yekuwedzera kuwedzera yakaderera pane iyo yeustenitic simbi isina simbi, iri padyo neiyo yesimbi kabhoni. Iyo inokodzera kubatana nekabhoni simbi uye ine yakakosha mainjiniya kukosha, senge kugadzirwa kweanoumbanirana mahwendefa kana linings.
6) Kunyangwe iri pasi pesimba kana static mutoro mamiriro, ine yakakwira simba rekutora simba kupfuura austenitic simbi isina simbi. Izvi ndezvematongerwo zvikamu zvekugadzirisa netsaona dzakangoerekana dzakadai sekurovera uye kuputika. Duplex simbi isina chinhu ine pachena zvakwakanakira uye ine inoshanda application kukosha.
Duplex Stainless Simbi 2205 Chikumbiro munda:
Midziyo yekumanikidza, akanyanya-kumanikidza matangi ekuchengetedza, mapaipi-ekumanikidza, zvinopisa kupisa (indasitiri inogadzira makemikari).
• Oiri uye gasi mapaipi, kupisa exchanger fittings.
• Tsvina kurapwa hurongwa.
• Pulp uye pepa indasitiri classifiers, bhenacha michina, kuchengetedza uye kugadzirisa masisitimu.
• Rotary shafts, anodhindisa rolls, mashizha, impellers, nezvimwewo pasi pesimba-simba uye ngura-isingagone nharaunda.
• Cargo mabhokisi engarava kana marori
• Zvigadzirwa zvekugadzira chikafu
Pashure: Stainless Simbi F55 Bar / Plate / Pipe
Zvadaro: TIG / MIG ERNiFeCr-2 Inconel 718 Welding Waya
2205 Stainless simbi
2205 Bar yesimbi
2205 Pombi yesimbi
Stainless simbi 2205
Nimonic 75 bhaa / Chitubu / Waya / Sheet
stellite mhete, Welding waya, Stellite 6, Stellite 6B, Haynes 25 Waya, Chiwanikwa R26 bhaudhi,